ဝေဇယန္တာဥယျာဉ် အိမ်ရာ၊(85'×85') 2RC၊ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်၊ကိုယ်ပိုင်လမ်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10184847 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဘုရင္​့​ေနာင္​လမ္​း၊ ကမာၾကည္​၊ 40'x60'၊ BN-2,ဂရန္​​ေျမ။ (2000)သိန္း။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10183345 အတွက် ဗမာသဈစာကုမပွဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10182962 အတွက် လဝန်းရှင် အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်း သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သုဝဏ္ဏ အိုအိမ်တိုက်ခန်းရှာသူများအတွက် ထောင့်စွန်ခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10179346 အတွက် လဝန်းရှင် အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မူလုပ်ငန်း သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ အိမ်ရာဝင်း - ဝေဇယန္တာလမ်းအနီးတွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10177897 အတွက် TPL Myanmar Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် သုဝဏ္ဏ VIP 1 နေရာကောင်း လုံးချင်းအိမ်ညှိနှိုင်းဈေးဖြင့် အမြန်ရောင်းမည်။...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10176292 အတွက် Shwe Nann Htike Real Estate Company သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
Brain Works International School အနီး သုံးထပ်ခွဲတိုက် ထောင့်ခြံ ရောင်းမည်.
8,800 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10175356 အတွက် Infinity Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သဃ်န်းကျွန်း သုမဂ်လာအိမ်ယာ ထောင့်ခြံလုံးချင်းအမြန်ရောင်းမည်။
14,700 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10175254 အတွက် Amara Land Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ပြည်သာယာလမ်းမအနီး သုံးထပ်တိုက် အသစ် ရောင်းမည်.
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10175091 အတွက် Infinity Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သီရိရတနာရိပ်သာအတွင်း လုံးချင်းအိမ် ရောင်းမည်.
9,700 သိန်း (ကျပ်)
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10174951 အတွက် Infinity Real Estate သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်